Part 1: 4 Samsung Ngwaọrụ Managers maka Windows
Part 2: 4 Samsung Ngwaọrụ Managers maka Mac
Nkebi nke 3: 2 Samsung Ngwaọrụ Managers maka Android OS
Samsung Ngwaọrụ oru bụ nnọọ kemfe na-enyere gị iji nweta ngụkọta achịkwa gị Samsung ngwaọrụ. Ezie na e nwere ọtụtụ na nke ugbu a ahịa, ọ bụ nnọọ mkpa iji bulie nri otu ka i ghara ejedebe na ngwa na bụ ike iji na-ejisike arụ ọrụ. Ya mere, ọ na-ekwuru na nke mbụ mma i kwesịrị ịchọ na a Samsung Ngwaọrụ Manager bụ ala nke iji. N'ezie ọ na-nwere imezu ya ọrụ n'ụzọ dị irè na rụọ ọrụ nke ọma.
Kechioma n'ihi unu, anyị gbagote na top 10 Samsung Ngwaọrụ Managers na ahịa. Onye ọ bụla n'ime ndị a ngwa dị mfe iji na-arụ ọrụ nke ọma iji mezuo ọrụ ya e mere maka. Anyị kewara ndị a ngwa n'ime atọ dị iche iche; 4 Samsung ngwaọrụ Managers maka Windows, 4 Samsung Ngwaọrụ Managers maka Mac na 2 Samsung ngwaọrụ Managers maka Android os. Otú a ị ga-enwe ike n'ụzọ dị mfe ịhụ onye ahụ ga-dakọtara gị mkpa na nke ugbu a oge. Ka na-amalite na ngwa na-na-dakọtara na Windows.
Key Akụkụ: Wondershare MobileGo nwere otutu atụmatụ. Ọ enye gị ohere download, ibubata na mbupụ ma jikwaa data gị Samsung ngwaọrụ. I nwere ike ime ihe nile nke na na foto gị, egwú, na videos niile na push nke a bọtịnụ. Nke a ngwa-aga obere n'ihu kwa ọbụna ikwe gị jikwaa gị collection nke ngwa, na nkwado ma weghachite na ọbụna izipu ozi site na gị na desktọọpụ. Ọ dịkwa nnọọ mfe iji.
Review: 5 Stars si PC Advisor
Key Akụkụ: Samsung Kies e mere na-jikọọ gị Samsung ngwaọrụ gị PC. Ọ na-eme ka mmekọrịta nke data n'etiti gị na ngwaọrụ dị mfe karị na-enyere aka na-achọta ọhụrụ na bara uru ngwa. Ọ bụ ukara Samsung Manager na ngwa ma pụrụ ịbụ nnọọ kemfe.
Review: 4 Stars site Softpedia
Download si ebe a
3. My ekwentị Explorer
Mmepụta: FJ Software mmepe
Key Akụkụ: Nke a ngwa zuru okè maka ijikwa gị niile Android Devices bụghị nanị Samsung. Ị nwere ike ijikọ gị Samsung ngwaọrụ ka My ekwentị Explorer ma iji Bluetooth, Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB. Ọ na-enyere ị na-ahazi ozi gị, foto, videos, music na ọbụna faịlụ gị SD kaadị. Ọ na-enye gị ohere iji nkwado ndabere na mpaghara weghachite faịlụ gị Samsung ngwaọrụ.
Review: 4.0 Stars site techgeekandmore.com
Key Akụkụ: Nke a ngwa-arụ ọrụ na nnọọ ọtụtụ ntị gụnyere Samsung. Ị nwere ike ijikọ gị Samsung ngwaọrụ MobiLedit iji Bluetooth, eriri USB ma ọ Wi-Fi. Ị nwere ike iji ya hazie foto gị, videos, music, akwụkwọ na ọbụna ngwa ọdịnala na ụdaolu. Ọ nwekwara ike-eji na-na nkwado ma weghachite ekwentị gị.
Review: 4 Stars site PC ụwa
Key Akụkụ: Ọ enye gị ohere download, ibubata na mbupụ ma jikwaa data gị Samsung ngwaọrụ. I nwere ike ime ihe nile nke na na foto gị, egwú, na videos niile na push nke a bọtịnụ. Nke a ngwa-aga obere n'ihu kwa ọbụna ikwe gị jikwaa gị collection nke ngwa, na nkwado ma weghachite na ọbụna izipu ozi site na gị na desktọọpụ. Ọ dịkwa nnọọ mfe iji.
2. Samsung Kies maka Mac
Key Akụkụ: Samsung Kies e mere na-jikọọ gị Samsung ngwaọrụ gị Mac. Ọ na-eme ka mmekọrịta nke data n'etiti gị na ngwaọrụ dị mfe karị na-enyere aka na-achọta ọhụrụ na bara uru ngwa. Ọ bụ ukara Samsung Manager na ngwa ma pụrụ ịbụ nnọọ kemfe.
3. Ugboro abụọ ighikota
Key Akụkụ: Ugboro abụọ ighikota na-akasị ji maka syncing music, foto na vidiyo. Ọ ga-Otú ọ dị bụghị eme ihe ọ bụla n'ihi na ị ma ọ bụrụ na ị chọrọ jikwaa kọntaktị, ngwa ma ọ bụ ozi. Ọ ga--agaghị uru ma ọ bụrụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara weghachite Samsung ngwaọrụ.
Review: 4 Stars ọrụ fim
Mmepụta: XDA AirDroid
Key Akụkụ: The AirDroid bụ ngwa na e mere na-jikwaa gị Android ekwentị na mbadamba. Na a na ngwa ị nwere ike ijikwa na ọbụna izipu ozi site na gị na desktọọpụ. Ọ na-arụ ọrụ jikwaa gị ngwa, videos, music, foto na ụdaolu niile nnọọ ngwa ngwa na na aka nke a bọtịnụ. Ọ Otú ọ dị ike nkwado ndabere na mpaghara weghachiri ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Review: PC World nyere AirDroid 4.5Stars
1. ExDialer & Ndi ana-akpo
Key Akụkụ: ExDialer & Ndi ana-akpo bụ isi ihe na ngwa na-ejisie kọntaktsị na gị Samsung ngwaọrụ. Ọ bụ ihe na adreesị akwụkwọ faili. Ọ na-seamlessly integrates na Skye, Viber na Fring ka ohere maka VoIP oku. Ọ ga-eri gị banyere $ 4 na-a ngwa ọ bụ ezie na ọ dịghị-abịa na a 7 ụbọchị ikpe.
Mmepụta: Max MP
Key Akụkụ: Nke a na-eji ngwa e mere iji nyere gị aka jikwaa music na gị Samsung ngwaọrụ. Ọ na-abịa a otutu atụmatụ-enyere gị aka ime otú ahụ. Ọ na-abịa a free ikpe oge nke 15 ụbọchị inyere gị aka ikpebi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụ.
Review: 4.5 Stars User nyochaa
Best 5 Android Podcast Manager: Enwe Kwa Free oge
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Samsung Galaxy Y
Olee otú Naghachi ozi ederede site na esịtidem ebe nchekwa na gam akporo Devices
Akwado Video Formats site HTC Android ekwentị mkpanaaka na (HTC One gụnyere)
Olee otú Naghachi Photos si Samsung Galaxy
> Resource> Android> The Top 10 Samsung Ngwaọrụ Managers